खाडीमा कस्ता राजदूत परे ?- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
खाडीमा कस्ता राजदूत परे ?
वैशाख १९, २०७३ चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौं — कूटनीतिक करिअरका राजदूतहरू सकेसम्म खाडी मुलुक जान चाहँदैनन् । राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जनसम्पर्क समिति हुने हुनाले दलको आँखा खाडीमा परेको हुन्छ । विशेषगरी लेबीबाट दल चलाउनेहरूको आँखा त्यहाँ परेको पछिल्लो घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।
अहिले राजदूतको सिफारिसमा परेका एक/दुईबाहेक त्यस्तो अनुभव भएका व्यक्ति देखिएका छैनन् । खाडीमा नेपालीहरू धेरै रहेका कारण राजनीति निकै चल्ने हुनाले चन्दादेखि अन्य कार्यका लागि राजदूत उपयोग गर्न सकिने दलहरूको सोच हुन्छ । त्यही हुनाले खाडीमा दलीय नेताहरू नै राजदूत चयन हुने गरेका छन् ।
श्रम कूटनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा राजनीतिक दलका कोटाका राजदूतहरू जाने भएका छन् । लामो समयदेखि खाली रहेको कतारमा करिअरबाट जान पर्ने कुरा उठाउँदै आएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको रोजाइमा कतार परेन् । त्यहाँ राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूका खास व्यक्तिहरू परेका छन् । यसपटक करिअरबाट ८ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुँदा पनि खाडी परेन ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी पुगेका नेपालीहरूको उल्लेख्य संख्या रहेको मुलुक हो कतार र साउदी अरब । ती दुई मुलुकमध्ये कतारमा साढे तीन वर्षदेखि राजदूत छैन भने साउदी अरेबियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । सरकारले वैशाख ६ मा २१ स्थानमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने क्रममा सबै खाडीलगायत सबै दूतावासले राजदूत पाउने भने निश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कतारका लागि महेन्द्र सिंह र साउदी अरबका लागि अलिअख्तर मिकरानी परेका छन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भरतबहादुर रायमाझी, बहराइनमा पदम सुन्दास, इजरायलमा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण कोरियामा, युवराज कार्की परेका छन् भने ओमानमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट नाम सिफारिस हुन बाँकी छ ।
कतारका लागि सिफारिस भएका महेन्द्र सिंह त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रेक्टरसमेत भइसकेका प्राध्यापक हुन् । उनी पहिला राजावादी कित्तामा र पछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध हँुदै अहिले एमाओवादीमा छन् । त्रिविमा रेक्टर रहँदा आफन्त नियुक्तिलाई लिएर लामो विवादमा परेका थिए । यसअघि कतारमा एमाओवादीबाट मायाकुमारी शर्मा थिइन् । उनी विवादमा परेर हटाइएकी हुन् । त्यस अघि प्राध्यापन क्षेत्रबाटै परेका सूर्यनाथ मिश्र कतारका नेपालीबीच सम्झिरहने नाम हो ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित अलिअख्तर मिकरानी इन्जिनियर ठेकेदार हुन् । उनी एमालेका नेता पनि हुन् । यसअघि साउदी अरबमा एमाले कोटाबाट उदयराज पाण्डे राजदूत थिए । उनी गत वर्ष फर्केका छन् । त्यसअघि एमालेबाट गएका हमिद अन्सारी मृतकको पैसा आफ्नो खातामा राखेर खाएको अभियोगमा फर्काइएका थिए । परराष्ट्र अधिकारीको मिलेमतोमा त्यो कार्य भए पनि उनी एकल कारबाहीमा परेका थिए । अहिले मिकरानी पनि लामो समयदेखि एमालेभित्र रहेर काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् उनी एमाले मित्र पनि माधव नेपाल निकट मानिन्छन् ।
बहराइनमा राजदूत पहिलोपटक जान लागेको हो । तीन वर्षअघि खोलिएको उक्त दूतावासमा कार्यबाहक राजदूतले काम चलाउँदै आएका थिए । अहिले त्यहाँ पहिलो राजदूतको रूपमा पद्म सुन्दास जानेछन् । उनी दलित अधिकारकर्मी र माओवादी निकट हुन् । समता फाउन्डेसनको कार्यकारी निर्देशक रहेर विभिन्न कार्यक्रम संलग्न उनी एनजीओकर्मीको रूपमा परिचित छन् ।
नेपालीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त खाडीमा हरेक दलको जनसम्पर्क समिति रहेको र त्यहाँ पनि काठमाडौंमा झंै कोटा खोज्नदेखि विभिन्न कार्यमा राजदूतसँग मिलेर राजनीति गर्ने हुनाले पनि राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा ती स्थान परेको हुन सक्ने पनि परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् । खाडीमा धेरै नेपाली भएको साउदीमा एमाले, कतारमा एमओवादी, युएईमा राप्रपा नेपालले भागबन्डा लगाएका छन् । इजरायलमा, दक्षिण कोरियामा एमाले, बहराइनमा एमाओवादीबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा ओमान परेको भए पनि त्यहाँ अझै सिफारिस हुन सकेको छैन ।
पहिला गएका राजदूतको अनुपातमा अहिलेको राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएका व्यक्तिको शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो रहेको भए पनि कूटनीतिक कुनै पनि खालको दख्खल देखिएको छैन् । कतिपय व्यक्तिहरू दल चहारेको र नियुक्ति लिंदा विवादमा परेका समेत छन् । कामदारलाई पर्ने समस्याबारेमा त्यति अनुभव नभएका व्यक्तिलाई त्यस्तो मुलुक पठाउन लगाएकोमा परराष्ट्र अधिकारीहरूले यसबाट सहज परिणाम जटिलता रहेको बताएका छन् ।
लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा कतारमा समस्या पर्दै आएको थियो । झन्डै चार वर्षदेखि राजदूतविहीनताको अवस्थामा रहेको कतारस्थित नेपाली दूतावासले अवका दिनहरूमा त्यो ग्याप पूरा गर्न निकै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पदमा राजनीतिक भागबन्डा र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकतम वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । सरकारले एकैपटक २१ स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिज्ञ, पञ्चायतकालीन हस्ती, पूर्वसैन्य अधिकारीदेखि प्राध्यापक, पत्रकार र परराष्ट्रका सहसचिवहरू परेका छन् ।
नियुक्तिका लागि एमालेबाट ६, एमाओवादीबाट ४, राप्रपा नेपालबाट ३, मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ र परराष्ट्र सेवाबाट ८ गरी २२ जनाको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नाम दिन नसक्दा एक स्थानमा राजदूत सिफारिस हुन सकेको छैन । तर सिफारिस भएकाहरूको पनि तत्काल नियुक्ति हुने छैन । उनीहरूको सुनुवाइ र अग्रिमो (सहमति) को प्रक्रिया बाँकी छ । संसद्को नियमावली नै नबनेका कारण सिफारिस भएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने या नहुने अझै निश्चित छैन । सुनुवाइ नहुँदासम्म सम्बन्धित मुलुकमा अग्रिमो (सहमति) का लागि नाम पठाउने र औपचारिक रूपले नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन् ।
सरकारले आवासीय दूतावास नै नभएको मुलुकमा समेत राजदूत सिफारिस गरेर फितलो कूटनीति देखाएको छ । दूतावास धेरै भएको र कटौती गर्न‘पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो । अस्ट्रियामा राष्ट्रसंघिय कार्यालय देखाएर दूतावास खोल्ने निर्णय गरिएको छ । त्यो मुलुकमा नियोग खोल्न पर्ने आवश्यकता कतैबाट देखिंदैन । अस्ट्रिया, क्यानडा, ब्राजिल, डेनमार्कलगायत केही मुलुकमा दूतावास राख्नु भनेको नेपाल सम्पन्न भएको र संसारभर दूतावास खोल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु मात्र हो, पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाले भने । चुस्त र सुविधा सम्पन्न दूतावास नै सरकारको प्राथमिकतामा हुन आवश्यक छ । धेरै दूतावास स्थापना गर्दैमा कूटनीति सफल हुने होइन उनले भने ।
दक्षिणी छिमेकमा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय राजदूत रहेका कारण उत्तर छिमेकलाई पनि त्यही स्तरको महत्त्व दिन अघिल्लो सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णयले चीनसमेत खुसी भएको छ । तर, जानेर वा भागबन्डा लगाएर भए पनि यो प्रकारको नियुक्तिको सिफारिसले दुई छिमेकलाई महत्त्व दिएको देखिएको छ । यसरी महत्त्व दिने मात्र होइन राजदूतावासको स्तरसमेत वर्गीकरण गर्न आवश्यक भएको परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
राजदूतमा प्रस्तावित पूर्वमन्त्री युवराज कार्की पञ्चायतकालबाटै राजनीतिमा रमेका व्यक्ति हुन । उनी एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । नारद भारद्वाज झापा आन्दोलनका नेता तथा त्रिविमा लामो समय अध्यापन गरेका व्यक्ति हुन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका पूर्वसहकर्मी भारद्वाजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै पञ्चायतकालमा झन्डै डेढ दशक जेल जीवन बिताएका थिए । शिवमाया तुम्बाहाम्फे र पनि एमालेसम्बद्ध मोरङकी नेतृ हुन् । खाडीबाहेक धेरै नेपाली भएको अर्को मुलुक हो जापान र अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा माओवादीको तर्फबाट र जापानमा एमाले तर्फबाट राजदूत सिफारिसमा परेका छन् ।
जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस खड्ग केसी त्यहीं पढेर आएका हुन्, जो हाल त्रिवि, राजनीतिशास्त्र विभागअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संकायका स्नाकोत्तरको संयोजक छन् र उनी एमालेमा पनि ईश्वर पोखरेल निकट मानिन्छन् । उनी जापानी भाषामा दख्खल राख्ने र जापानले पनि भाषा जानेका कूटनीतिलाई महत्त्व दिने हुनाले उनको नाममा मन्त्रिपरिषद्मा विवाद रहेन ।
अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा परेकी लक्की शेर्पा भने लामो समय एमालेमा रहेकी तर पछिल्लो समय एमाओवादी निकट भएकी व्यक्ति हुन । उनी अघिल्लो संविधानसभामा एमालेको सभासद थिइन् भने अहिले एमाओवादीबाट राजदूतमा परेकी हुन् । उनी अहिले नियुक्ति सिफारिस भएकोमा सबैभन्दा कान्छो राजदूत हुन् । डेनमार्कमा पनि एमाओवादी निकट व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ । दी राइजिङ नेपालका प्रधानसम्पादक युवनाथ लम्साल पहिले एमाले र पछिल्लो समय एमाओवादीनिकट हुन् । उनी डेनमार्कमा परेका छन् । उनी लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा लो प्रोफाइलमा बसेर पत्रकारिता गरेका व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालको सिफारिसमा परेका निरञ्जन थापा पञ्चायतकालीन मन्त्री, भरतबहादुर रायमाझी नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी र खगेन्द्र बस्नेत पूर्वसचिव हुन् । पूर्वसचिव बस्नेत अहिले राप्रपा नेपालमा छन् । निरञ्जन थापा राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरूले त्यहाँ गएर मुलुकका लागि भन्दा पनि आफ्नो र दलका लागि काम गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्य आठजना परराष्ट्र मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिवहरू राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् । मन्त्रालयमा लामो समयदेखि राजदूत हुन नसकको अवस्थामा एकैपटक ८ जना पर्दा मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिमा बाजी मारेको देखिन्छ ।
नयाँ खुल्ने भनिएको दूतावाससहित ३२ नियोगमा बराबर बनाउन मन्त्रालयबाट ८ जना परेका छन् । हाल मन्त्रालयको कर्मचारी ८ र राजनीतिक नियुक्तिबाट
२ जना राजदूत मात्र रहने हुनाले मन्त्रालयबाट ८ र बाहिरबाट १४ गरी ५०/५० प्रतिशत मिलाइएको
पनि मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । अहिले बाँकी रहेका मिसनहरूमा भारत र अमेरिकाबाहेक सबैमा कूटनीतिक सेवामा राजदूत कार्यरत छन् । न्युयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियो तथा दूतावासहरू क्यानडा, कुवेत, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, फ्रान्स र थाइल्यान्डमा ८ जना करिअर राजदूत कार्यरत छन् । सार्क सचिवालयमा पनि परराष्ट्रका पूर्वसचिव परेका हुनाले पनि अहिले ८ राजदूत परराष्ट्रबाट परेकामा आफूहरूले बाजी मारेको भन्नेमा उनीहरू छन् ।
यसअघि राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा निर्णय हुन सकेको थिएन । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले अमेरिका र भारतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तथा अन्य ६ देशमा परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई राजदूत बनाए पनि अन्य रिक्त स्थानबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । लामो समयदेखि दूतावासहरू खाली रहेकाले कूटनीतिक सामथ्र्य खस्किरहेका बेला वर्तमान सरकारले २१ स्थानमा एकसाथ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो ।
एकताको प्रतीक : फिफा
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७३ १२:१६
वैशाख १९, २०७३ सुशील पौडेल
काठमाडौं — प्रियंका कार्की अहिलेकी चल्तीकी नायिका त हुन् नै, तुलनात्मक रूपले प्रतिष्पर्धीभन्दा सफल पनि छन् । गत वर्ष उनको ‘वडा नम्बर छ’ हिट भएपछि त झन् एकपछि अर्को फिल्ममा दोहोरिन थालेकी छन् । उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड समारोहमा पनि पछिल्लो समय हात खाली हुन छोडेकी छन्, प्रियंका ।
बरु ब्लक गर्नुस्
मलाई : प्रियंका कार्की
फलेको रूखमै झटारो हानिन्छ भनेझैं सफलताको शिखरमा पुगेका सेलिब्रिटी अझ त्यसमा पनि नायिकालाई पछ्याउने, जिस्काउने र तनाव दिने कति होलान् ? यस्तै तनावको सिकार भएकी छन्, प्रियंका । तनावले कतिसम्म उग्र रूप लियो भने, यसै साता उनले फेसबुक मार्फत स्टाटस नै लेख्नुपर्‍यो, ‘मेरो मनलाई रुवाउनेहरूका लागि’ भन्दै । लामो स्टाटस लेख्ने क्रममा उनले दु:ख दिने ‘फ्यान’ लाई सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिंदै नायिकाले भनेकी छन्, ‘यदि तपाईंलाई म मन पर्दैन भने कृपया मेरो पेज हेर्दै नहेर्नुस् वा ब्लक नै गरिदिनुस् । तर जथाभावी अश्लील नलेखिदिनु होला ।’
आफ्नो पेजमार्फत् स्टाटस लेखेको
एक घन्टा पनि नबित्दै प्रियंकाको स्टाटस भाइरल बनेको थियो । उनको समर्थनमा अन्य कलाकारदेखि फ्यानसम्मले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । एक दिनमा झन्डै ५० हजारले लाइक र १६ सयले सेयर
स्टाटसमा प्रियंकाले लेखेकी छन्, ‘जब जब म नयाँ फोटो हाल्छु, कुनै नयाँ फिल्मको गीत वा म्युजिक भिडियो सेयर गर्छु, किन यति धेरै गाली गर्नुहुन्छ ? अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्दा बडा आनन्द महसुस हुन्छ हो ? एकदम महान् काम गरेझैं लाग्छ हो ?’ उनले आफूले कलाकारितालाई नै दिलोज्यान लगाएर काम गर्दा आउने यस्ता आलोचनाले चित्त दुख्ने गरेको बताउँदै भन्छिन्, ‘यहाँहरूको घरमा छोरी चेली छैनन् ? एकपटक सोच्नुस् त, तपाईको घरको दिदी–बहिनी, आमा, भाउजू, छोरीहरूमाथि यस्तो शब्द कसैले प्रयोग गर्दा तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? ठीक त्यस्तै महसुस हुँदो होला नि मेरा बुबा, आमा, भाइ र अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई पनि ।’
राज्यले तोक्ने भयो सेलिब्रिटी
से लिब्रिटी त्यो हो, जसका फ्यान फलोईंग उल्लेख्य संख्यामा हुन्छन् र सामाजिक सञ्जालका मार्फत पनि आफ्ना मुद्दा, काम वा विचारलाई बहसमा ल्याउन सक्छन् । हलिउड/बलिउडमा गीत/संगीत र फिल्म क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका सबैभन्दा धेरै फ्यान हुने गर्छन् । त्यसैले सेलिब्रिटी हुन फ्यानको अह्म भूमिका रहन्छ । आजको सेलिब्रिटी भोलि सामान्य पनि बन्न सक्छ र आजको सामान्य भोलिको ठूलो सेलिब्रिटी पनि कहलिन्छ ।
तर नेपालमा भने यतिबेला सेलिब्रिटीको परिचय राज्यले नै दिइरहेको छ । सोमबार मात्रै राज्यले १३ वरिष्ठ कलाकर्मी/फिल्मकर्मीलाई सेलिब्रिटी मान्दै परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । जसमा अभिनेता हरिप्रसाद रिमाल, निर्देशक यादव खरेल, अभिनेता, निर्देशक नीर शाह, अभिनेत्री भुवन चन्द, अभिनेत्रीहरू बसुन्धरा भुसाल, सुभद्रा अधिकारी, शकुन्तला शर्मा, निर्देशक चेतन कार्की, गीतकार किरण खरेल, निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा, निर्माता उद्धव पौडेल, प्राविधिक गेहेन्द्र धिमाल र छायाँकार मञ्जुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
परिचयपत्र प्रदान गर्दै मन्त्री राईले कलाकारको योगदानलाई राज्यले चिनेर राष्ट्रिय स्तरको पहिचान उपलब्ध गराएको बताएका थिए । चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा कलाकार हरिहर शर्मा तथा सरिता लामिछाने सहितको समितिले सिफारिस गरेका कलाकारलाई पहिलो चरणको परिचयपत्र वितरण गरिएको हो । कार्यक्रममा कलाकार शर्माले परिचयपत्र सेलीब्रेटी कार्डभन्दा फरक रहेको बताए । शर्माले भने, ‘यसलाई सेलीब्रेटी कार्डको रूपमा नहेरेर चलचित्रकर्मीको योगदानलाई राज्यले चिनेको अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ चलचित्र निर्देशक यादव खरेल चलचित्रकर्मी जनताको नजरमा सधैं परिचित सम्मानित रहे पनि राज्यले पहिलोपटक सम्मान गर्न सुरु गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यो परिचयपत्रको गरिमा सरकारले नै कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता, अर्थ, उपयोगिता र परिभाषा सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ अभिनेता नीर शाहले परिचय पत्रले चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न झक्झक्याउने बताए ।
सरकारले चलचित्रकर्मीको योगदानलाई मूल्यांकन गर्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन ‘चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार तीन किसिमको परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार विशिष्ट, वरिष्ठ र सामान्य गरी तीन किसिमका चलचित्रकर्मीको परिचयपत्र व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले परिचयपत्र वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिने बताउँदै दोस्रो चरणको परिचयपत्र वितरण यही वैशाखभित्रमा गरिने जानकारी दिए ।
‘समग्र नेपाली समाजको यथार्थ’
काँकडभिट्टा– ‘बाटोमुनिको फूल २’ को प्रवद्र्धनका लागि यसका निर्माता तथा नायक यशकुमार र बाबु बोगटी झापामा व्यस्त छन् । वैशाख १० देखि देशभरका सिनेमा हलहरूमा फिल्म रिलिज हुँदै छ । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेदलाई फिल्मको मुख्य विषय बनाइएको यशले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
‘‘बाटोमुनिको फूल’ को सफलतापछि त्यस्तै प्रवृत्तिको फिल्मको माग दर्शकहरूबाट आएकाले सिक्वेल निर्माण गरेका हौं,’ यशले भने, ‘जातीय छुवाछूतको चपेटामा परेका कथित दलित जातिको कथा फिल्मले बोल्छ । समग्र नेपाली समाजको यथार्थ चित्र फिल्ममा देखाउने प्रयत्न गरेका छौँ ।’
उनले फिल्मको ९० प्रतिशतभन्दा बढी छायांकन झापामै गरिएको जानकारी दिँदै कतिपय नपत्याउँदा स्थानलाई समेत फिल्ममा खिचिएको जनाए । ‘२०४० साल र अहिलेको झापा दुवै कालखण्डलाई फिल्ममा समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘फिल्ममा झापाकै कलाकारहरूको समेत उल्लेख भूमिका छ ।’
सिक्वेलको निर्देशन सुवर्ण थापाले गरेका हुन् । युवा वर्गलाई लक्ष्य गरी बनाइएको ‘बाटोमुनकिो फूल २’ बाट पैसा र समयको सदुपयोग हुने अर्का नायक बाबुले दाबी गरे । ‘यो फिल्म हेर्दा बेकारमा पैसा नाश भयो भन्ने दर्शकलाई लाग्नेछैन,’ उनले भने, ‘प्रेम, रोमान्सका साथै सस्पेन्स थ्रिलर छ फिल्ममा ।’
उक्त फिल्ममा यश र बाबुका अलवा दिलीप रायमाझी पनि नायकको भूमिकामा देखिनेछन् । ऋचा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा र अशिष्मा नकर्मी नायिका छन् भने अर्पण थापा खलपात्र छन् । । भेट्रान अभिनेताहरू टीका पहाडी, गणेश उप्रेती तथा अभिनेत्री शुभद्रा अधिकारीको अभिनयले फिल्म दमदार बनेको यशले ठोकुवा गरे ।
सोनाक्षी र रेनिशा
बने चाइल्ड आइकन
चा इल्ड आइकनको उपाधि यस वर्ष सोनाक्षी श्रेष्ठ तथा रेनिशा कार्कीले जितेका छन् । गत शनिवार काठमाडौंको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न यो प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनालेमा ओलम्पिया स्कुलकी सोनाक्षीले ‘चाइल्ड आइकन २०१६ जुनियर’ तथा लिटिल एञ्जल्स स्कुलकी रेनिा कार्कीले ‘चाइल्ड आइकन २०१६—सिनियर’ को उपाधि जित्न सफल भएका हुन् ।
प्रतियोगितामा डीएभी स्कुलकी आरुषी जलान तथा सरस्वती बोर्डिङ स्कुलकी काजोल अधिकारी जुनियर तथा सिनियरतर्फका फस्ट रनर्स अप भए भने ओलम्पिया स्कुलकै येरुषा सिटौला तथा सोही विद्यालयकी आयुश्री सिंहले सेकेन्ड रनर्स अपको उपाधिमा चित्त बुझाए ।
प्रतियोगितामा यथार्थ श्रेष्ठ र साम्राज्ञी राउतले मोस्ट चार्मिङ, सिन्जा अधिकारी तथा शिवांगी शाहले बेस्ट क्याटवाक, आसिफ मलिक तथा रुजल राजोपाध्यायले बेस्ट पर्सनालिटी, नूर श्रेष्ठ तथा विभूति घिमिरे बेस्ट परफरमेन्स, लक्ष्य रजक तथा ओन्स गौतमले मोस्ट फोटोजेनिक, सिम्रा साम्पाङ तथा आर्या बज्राचार्यले बेस्ट डिसिप्लिन, सुभल अवाले तथा सोना भेटवालले क्याटेस्ट चाइल्ड, रेशिका तण्डकाुर तथा अमीरचन्द्र विवेकले मोस्ट कन्फिेडेन्ट, रोजा श्रेष्ठ तथा काजोल अधिकारीले बेस्ट हेयर, सिल्फ श्रेष्ठ तथा चुनौती लिम्बुले बेस्ट स्किन, जस्मिन काफ्ले तथा धनञ्जय कर्णले बेस्ट स्माइल, सैफ मलिक तथा मुस्कान वैद्यले बेस्ट फ्रेन्डसिप, एन्भी श्रेष्ठ तथा दीप्शा प्रधानले मोस्ट हेल्दी, सभरजंग खड्का तथा सूर्य विदुषी दाहालले बेस्ट सोसल सर्भिस, आर्यन अमात्य तथा स्वर्णीमा श्रीले स्मार्ट चाइल्ड विधाको अवार्ड जित्न सफल भए ।
मिडिया ल्यान्डद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको कोरियोग्राफी गायिका प्रशंसा श्रेष्ठले गरेकी हुन् । प्रतियोगिताको क्रममा निशा देसार, जुना प्रसाईं, प्रशंसा श्रेष्ठ, रूपक डोटेल आदि गायक–गायिकाले आफ्ना लोकप्रिय गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७३ १२:०५
सफा टालोको सर्वसुलभता
सम्पादकीय चैत्र ६, २०७५
रजस्वला जस्तो नियमित स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रियाबारे पनि अझै नेपाली समाजमा कुरीति जारी छ । सुदूर र मध्यपश्चिमी पहाडी गाउँमा छाउपडी हटिसकेको छैन । राजधानीदेखि सहर बजारहरूसम्म समेत...
केशव दाहाल चैत्र ६, २०७५
नेपाली राजनीतिमा ‘विचारको बहस’ यात पूर्वाग्रही छ या परम्परागत । मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरूलाई लाग्छ— दुनियाँमा मार्क्सवाद जप्नेहरू मात्र वैचारिक हुन्छन् । अर्कातिर उदारवादीहरू ठान्छन्— पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै संसारको...
महिला र राज्यको चरित्र
कपिलवस्तु घर भएकी रमा गुप्ता (नाम परिवर्तित) ले विवाह भएको १९ वर्ष बित्दा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छैनन् । उनका छोरा नै १७ वर्षका भइसके । छोराको...
कमल रिजाल चैत्र ६, २०७५
फागुन शुक्ल पूर्णिमालाई फागुपर्वको रूपमा मनाउँछन्, नेपालीहरू । यसै दिन साँझ होलिका दहन गर्ने चलन छ । यसलाई चीरदाह भन्ने गरिएको पनि छ । यस दिनलाई फागुपूर्णिमा वा...